Dhinacyo ka fal-celiyey doorashada Qoor Qoor
Madasha Xisbiyada Qaran ee Soomaaliya ayaa cambaareysay doorashadii shalay ka dhacday Galmudug ee madaxweyne loogu doortay Axmed Cabdi Qoor Qoor, iyo mowqifkii uu ka qaatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto.
Qoraal uu shalay soo saaray ayaa danjire Yamamoto waxa uu ugu hambalyeeyey Qoor Qoor, isaga oo ugu baaqay dhincyada Galmudug wada-hadallo nabadeed iyo inay ka fogaadaan rabshadaha.
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa qoraal maanta kasoo baxay ku sheegtay in danjire Yamamoto uu “si aan caqliyad ku dhisneyn u sharciyeeyey hanaan doorasho oo musuq-maasuq iyo qiyaameyn ku dhisan.”
Qoraalka Madasha Xisbiyada ayaa lagu sheegay in bayaanka kasoo baxay Yamamoto uu macnihiisu yahay “inuu ka tanaasulay mudnaantiisa ahayd diblomaasi eex la’aan ah oo awooddiisa u adeegsada inuu wada-hadallo ka dhex abuuro Soomaalida.”
Dhinaca kale, qoraal kasoo baxay AMISOM ayaa loogu hambalyeeyey madaxweynaha iyo xubnaha kale ee shalay lagu doortay magaalada Dhuusomareeb.
AMISIOM ayaa ugu bqqday Qoor Qoor, oo madaxweyne loo doortay inuu sii wado shirka dib u heshiiisnta Galmudug, islamarkaana uu xaqiijiyo in dhammaan dhinacyada siyaasadeed ee Galmudug ay wax ku yeeshaan maamulkiisa.